Iibinta kulul ee xagaaga cusub shaararka golf-yada polo golf-ka midabkeedu caadada yahay funaanado polo Soo saare iyo Warshad | Lijinghui
Xaraashka iibka kulul ee xagaaga cusub funaanadaha golf-ka ee polo shaatiyada midabbada caado u ah
Magaca badeecada Xaraashka iibka kulul ee xagaaga cusub funaanadaha golf-ka ee polo shaatiyada midabbada caado u ah
Waqtiga Hogaaminta Gaaban ee Shirtka Shiinaha iyo qiimaha Polo Shirt, oo ku saleysan badeecooyin leh tayo sare, qiimo tartan, iyo adeegyadeena kaladuwan ee buuxa, waxaan uruursanay xoog iyo khibrad takhasus leh, waxaanna dhisnay sumcad aad ufiican berrinka. Iyadoo ay weheliso horumarka joogtada ah, waxaan nafteenna u hibeynaynaa oo keliya ganacsiga gudaha Shiinaha laakiin sidoo kale suuqa caalamiga ah. Waxaad ku dhaqaaqi kartaa alaabteena tayada sare leh iyo adeegga xiisaha leh. Aynu furno bog cusub oo waxtar leh iyo laba-guul.
Iyadoo ay taageerayaan koox IT aad u horumarsan oo takhasus leh, waxaan ku siin karnaa taageero farsamo iibka kahor & iibka kadib ee iibka Hot Factory Shiinaha Dharka Isboortiga Dharka Dharka Daabacaadda Jumlada Polo Shirt Design Men′s Polo T Shirt, Ku soo dhawow si aad u tagto waaxdeena warshadaha iyo waxsoosaarka. Hubso inaad runtii xor u tahay inaad nala soo xiriirto haddii aad u baahato gargaar dheeraad ah.
Ururkeenu wuxuu u balan qaadayaa dhamaan macaamiisha wax soo saarka heerka koowaad iyo xalka iyo adeegga ugu qanacsanaanta iibinta kadib. Waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisheena joogtada ah iyo kuwa cusub si ay noogu soo biiraan Waqtiga Gaaban ee Hogaaminta Shiinaha Ragga Calaamadaha Gawaarida Gawaarida Dheeriga ah ee Raglan Bjj Rash Guard Athletic Polyester Spandex Tee Blank Straight Hem Surfing Wet T-Shirt, Ku soo dhawow wixii baaritaan ah shirkadeena. Waxaan ku farxi doonnaa inaan idin dhexgalno macaamil ganacsi oo wanaagsan!
Qiimaha macquulka ah ee Shirtka Shiinaha ee Badminton Shirt iyo Isboortiga T-Shirts qiimaha, Shirkaddayadu waxay horeyba u dhaaftay heerka 'ISO' waxaanan si buuxda u ixtiraameynaa rukhsadaha macaamiisheena iyo xuquuqdooda. Haddii macaamilku bixiyo nashqado u gaar ah, Waxaan dammaanad ka qaadi doonnaa inay iyagu noqon doonaan kuwa keliya ee yeelan kara alaabadaas. Waxaan rajeyneynaa in alaabtayada wanaagsan ay macaamiisheenna u keeni karto nasiib weyn.
Hore: Daabacaadda dahab bixiyaha moodada gambarka polo caadada 100% shaarka polo Cotton
Xiga: Daabacaadda naqshadeynta naqshadeynta naqshadeynta cusub ee unisex sublimation daabacaadda funaanadaha ragga
Gold qeybiye fashion collar polar collar col ...